नेपाली फिल्ममा अर्धनग्न-अश्लील दृश्य नराख्न आग्रह
Monday, 04 June 2012 08:03	नागरिक
काठमाडौं, जेठ २२-पछिल्लोपटक नेपाली चलचित्रमा अश्लील दृश्य बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। चलचित्र लेखक तथा निर्देशक मनिष पन्तद्वारा लिखित 'जिन्दगानी दर्पणछायाँ' चलचित्र प्रदर्शनीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चलचित्र पत्रकार शान्ति प्रियले आफ्नो चलचित्रलाई लोकप्रिय बनाउन र चलाउने नाममा हदैसम्मको अश्लील दृश्य नराख्न चलचित्र लेखक, निर्माता र निर्देशकहरुसँग आग्रह गरेका हुन्।
'फिल्मभन्दा फरक थिएन संविधान सभा'
Sunday, 03 June 2012 13:54	नागरिक
दीपेन्द्र लामा, काठमाडौं, जेठ २१- विघटित संविधान सभाको सबैभन्दा रोचक विशेषता के थियो? चार वर्षसम्म संविधान सभाका दृश्यको छायांकन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका अमोल शर्मा जवाफ दिन्छन्, '६०१ जनाको विशाल समूह तर जहिले पनि अत्यन्त न्यून उपस्थिति।'
सभासदहरू खचाखच भरिएको दृश्य खिच्ने अवसर दुईचार पटक मात्र जुर्‍यो अमोललाई। सभासदको सट्टा रित्ता कुर्सीहरू खिच्नुपरेकोमा उनको दुखेसो छ, 'नौ जना मात्र सभासद उपस्थित भएको बैठक पनि खिचेको छु।'
'एटिएम' छाडा, निर्माता संघ निरंकुश!
Sunday, 03 June 2012 08:45	नागरिक
काठमाडौं, जेठ २१ (नागरिक)- यु ट्युबमा रिलिज गरिएको 'एटिएम'को प्रोमोले फिल्म उद्योगकै घोर अपमान र बेइज्ज्त गरेको ठहर नेपाल चलचित्र निर्माता संघले गरेको छ। संघले सो फिल्मका निर्माता एवं संघका साधारण सदस्य दिनेश थापाको नाममा शुक्रबार काटेको पत्रको व्यहोरा यस्तो छ - 'उपरोक्त विषयमा तपाईंको कम्पनीको ब्यानरमा निर्मित फिल्म 'एटिएम'को प्रोमो/ट्रेलर/तस्बिर केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रसारण भइरहेकोमा त्यसमा संलग्न श्रव्यदृश्यप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
शाहरुखपछि रणवीर कपुरमाथि सार्वजनिक स्थानमा धूमपानको आरोप
Saturday, 02 June 2012 14:45	राजेन्द्र ज्ञवाली
मुम्बई, जेठ २० (एजेन्सी)- बलिउड कलाकारहरूमा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्ने चलन सामान्य भएको जस्तो छ। शाहरुख खानपछि अब रक स्टार रणवीर कपुरमाथि पनि सार्वजनिक स्थानमा चुरोट पिएको आरोप लागेको छ। राजस्थानमा उदयपुरको एउटा अदालतले अभिनेता रणवीर कपुरलाई सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गरेको आरोपमा आगामी २६ जुनमा सम्मन जारी गरेको छ।
'चरचर चुहियो जवानी'
Friday, 01 June 2012 18:49	नागरिक
काठमाडौं, जेठ १९ (नागरिक)- 'चरचर चुहियो जवानी' पछिल्लो पटक विवादित बनेको फिल्म 'एटिएम'को गीत इन्दिरा जोशीले गाएकी हुन्। शब्द छनोट सामान्य भएकै कारण उनले डेढ महिनाअघि प्रिज्म स्टुडियोमा बिना हिच्किचाहट गीत रेकर्ड गराएकी थिइन्।
नग्नताको बजारमा रोजलीन खानको प्रवेश
Friday, 01 June 2012 14:19	राजेन्द्र ज्ञवाली
(8 votes, average 2.00 out of 5)
मुम्बई, जेठ १९ (एजेन्सी)-कुनै बेला राखी सावन्त एक्लै थिइन्। अब त लाग्छ निर्लज्जताको बाढी आएको छ। वीना मलिकबाट हुँदै यो सीलसीला पुनम पाण्डे र अहिले रोजलीन खानसम्म आइपुगेको छ। रोजनीलन पनि पुनमको देखा-देखी नग्न भएकी छिन। जुन स्थिति छ त्यसको आधारमा यो सीलसीला अझ अगाडि बढ्ने पक्का छ।
रोजलीन पनि यो त सुरुवात मात्र भएको बताउछिन्। 'मेरा प्रशंसकलाई योभन्दा पनि हट तस्विर हेर्ने अवसर प्राप्त हुने छ। यस्तै किसिमको कुरा पुनम पाण्डेले पनि टि्वट गरेकी थिइन्। शाहरुख खानको टिम कोलकता नाइटराइडर्सको जितमा उनी नग्न भएकी थिइन्।
यस अघि रोजलीन खानले महेन्द्र सिंह धोनीको टिम आइपिएल ५ को विजेता बन्न सके आफू धोनीकासाथ डेटमा जानुकासाथै क्रिकेटरकासाथ बिकनी फोटो सुट पनि गर्ने बताएकी थिइन्।
झमेल, धुपी र राजवल्लभ
Thursday, 31 May 2012 08:53	नागरिक
दीपेन्द्र लामा, काठमाडौं, जेठ १८ - सहरियाहरूको नयाँ गन्तव्य झमेलमा मान्छेहरूको चहलपहल बाक्लिरहेको थियो। टाढैबाट छुट्टिए राजवल्लभ कोइराला, जो नेपाली फिल्मका एक बिकाउ 'परिकार' हुन्। झम्सिखेलमा भर्खरै खुलेको 'हाट बजार' झमेलको जस्तै नौलो र अनौठो थियो उनको गेटअप। झ्याप्प दाह्री र गठिलो शरीर। नयाँ राजवल्लभ देख्दा नौ वर्षअघि सुन्धाराको भारतीय पुस्तकालयमा सत्यजित रेको फिल्म 'सद्गति' हेर्दाको दिन सम्झना आयो।
'रौडी राठोर'मा छैनन् हमाल
Thursday, 31 May 2012 08:10	नागरिक
काठमाडौं, जेठ १८ (नागरिक) - अक्षय कुमार र सोनाक्षी सिन्हा अभिनित बलिउड फिल्म 'रौडी राठोर'मा नेपाली अभिनेता राजेश हमालको अतिथि भूमिका रहेको खबर बुधबार अचानक फैलियो। फिल्मको विकिपेडिया पेजमा हमाल 'चिन्टा टा चिटा चिटा' गीतमा इन्स्पेक्टर अर्जुन शर्माको रूपमा देखा पर्ने भनेर उल्लेख थियो।।
पिएर 'वाइल्ड' हुने केटी मन पर्दैन
Wednesday, 30 May 2012 15:07	नागरिक
काठमाडौं, जेठ १७ (नागरिक)- प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म 'मालतीको भट्टी'मा रेखा थापाले भट्टीवाल्नी बनेकी छिन्। गणेशदेव पाण्डेको निर्देशनमा बनेको फिल्मको प्रोमोमै रेखाले दर्शकलाई ब्रान्डेड होइन लोकल मदिरा पिउने निम्तो दिइरहेकी छिन्।